မျိုးကျော့မြိုင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း 'ကျွန်တော်က သီချင်းဆိုရမှ မဟုတ်ပါဘူး စင်မြင့်ထက်မှာ ဆိုနေရတဲ့သူတွေကို ကူညီနေရလည်း ကျေနပ်တဲ့လူပါ'
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂီတရေစီးသည် အပြောင်းအလဲ အချိုးအကွေ့များ၊ ဖန်တီးမှုအသစ်များဖြင့် ခရီးဆက်လျက်ရှိကြသည်။ ထိုသို့ ဂီတအသွင်သစ်တစ်မျိုးကို ပရိသတ်များ ရှေ့ချပြသည့်အခါတိုင်းတွင် ဝေဖန်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်ရမည်မှာမလွဲပင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ထိုဝေဖန်မှုများကို တွန်းလှန်ရင်း၊ ပရိသတ်၏ခြောက်သွေ့သော အားပေးသံများအား အားဖြည့် ပြန်လည်မွေးမြူရင်း အီလက်ထရောနစ် ဂီတတစ်ခုကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ မွေးဖွားပေးခဲ့သူ တစ်ဦးရှိပါသည်။ သူသည် ' ကျွန်တော့်နာမည် မျိုးကျော့မြိုင်ပါ။ ခုနစ်မိုင်မှာနေပါတယ်' ဆိုသော မိမိအကြောင်းရိုးရှင်းသော စာသားများဖြင့် ဂီတရသတစ်မျိုးကို ပေးစွမ်းတတ်သူ ၊ 'မယ်မဒီလေးလား မှားမိတယ် ' ဟူသည့် နူးညံ့ညင်သာသော ဖွဲ့နွဲ့မှုများ ရင်ခုန်ပျံ့လွင့်မှုများကို သံစဉ်များဖြင့်သယ်ဆောင်လာတတ်သူ၊ 'ရော့ခ်၊ ရောခ့် ..ရောခ့် အင်ရိုး' ဟူသော မြူးမြူးကြွကြွ တေးသီချင်းများဖြင့် စိတ်လန်းဆန်းမှုကို ဖန်တီးနိုင်သူစသည်ဖြင့် ဂီတရသမျိုးစုံကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် မျိုးကျော့မြိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ထူးခြားသော သူ၏မင်္ဂလာသတင်းဖြင့် ပရိသတ်ရှေ့ပြန်ရောက်လာသူ မျိုးကျော့မြိုင်၏ ဘ၀အကွေ့မှ ပြောင်းလဲမှုများနှင့် သူ၏ဂီတများအကြောင်းကို ယခုလိုရှုမြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
မေး - ကိုမျိုးကျော့ရဲ့ One Man Show ဖျော်ဖြေပွဲအယ်ဘမ်ကို ဘယ်တော့လောက် ပရိသတ် လက်ထဲထည့်ဖို့ စိတ်ကူးထားပါသလဲ။
ဖြေ-ပရိုဂျူဆာအနေနဲ့ အရိပ်အခြည် ကြည့်နေတယ်နဲ့ တူပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ ချက်ချင်းကြီးတော့ ထွက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်သေးဘူး။
မေး - ဒီနှစ်ထဲထွက်မယ့် ကိုမျိုးကျော့စီးရီးကို အွန်လိုင်းကနေ ဖြန့်ချိမယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကို ဆိုလိုတာလဲ။
ဖြေ- အွန်လိုင်းကဖြန့်မယ်ဆိုတာက Audio ကို အွန်လိုင်းက တစ်နေရာမှာတင်ပေးပြီးFree Down loadလုပ် လို့ရအောင် ပေးထားမယ်။ ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီကျမှ ဖြန့်ပြီးရောင်းဖို့ အရင်က စိတ်ကူးထားတာပါ။ မသေချာသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ ခွေထွက်နိုင်အောင် လုပ်နေတယ်။
မေး - ကိုမျိုးကျော့ရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်စီးရီးက Lifestyle အပြောင်းအလဲနဲ့အတူ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခံယူချက်၊ ရှုထောင့်တွေကို တွေ့ မြင်ရမှာလား။
ဖြေ- အရင်က ကျွန်တော်က ကိုယ်လုပ်တဲ့ ဂီတအပေါ်ကို အရမ်းအချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုရေး ရင်ရော၊ ရေးပြီးတီးရင်ပါ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှ၊ ပြီးလို့အချောဆိုလည်း ကိုယ်တိုင်ပဲ၊ အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် တစ် ပတ်လောက်ကားထဲမှာ အကျယ်ကြီး ဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြည့်ရမှ၊ အဲလိုမျိုး သီချင်းအပေါ် အရမ်းခံစားခဲ့တဲ့ဘ၀။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တော့ လူ့ဘ၀ဆိုတာ ဂီတတစ်ခုတည်းနဲ့လည်း မပြီးသေးဘူး၊ မိသားစုဘ၀ ဆိုတာလည်း တည်ဆောက်ရမယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်အသက်အရွယ်၊ ကိုယ်ဖြတ်သန်းထားတဲ့ အဟုန်နဲ့လုပ်ရမယ့် အရာတွေ၊ ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေ ကိုလည်း သိလာတယ်။ အဲဒီအတွက် ပစ္စုပ္ပန်စီးရီးကတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ လက်ရှိအကြောင်းတွေ၊ ကျွန်တော့်သွားနေတဲ့ ဂီတတွေကိုပြထားပါတယ်။
မေး- အခုတစ်ကိုယ်တော်ခွေနဲ့ နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ရှိုးအကြား ကွယ်ပျောက်နေချိန်မှာ ဘာတွေကိုလုပ်ကိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါသလဲ၊
ဖြေ- ရှိုးဆိုတာမျိုးတွေပဲ မလုပ်ဖြစ်တာပါ။ သီချင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ပုံမှန်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ် ဖြစ်ပါတယ်။
မေး- အခုနောက်ပိုင်းမှာ နည်းပညာတွေကို အဓိကသုံးစွဲပြီး အသံသွင်းတာကအစ အသံပြုပြင်တာမျိုးတွေကြောင့် ဂီတနယ်ပယ်မှာ ဘယ်လိုရလဒ်မျိုးတွေ ရရှိနိုင်တယ်လို့ မြင်မိပါသလဲ။
ဖြေ- ကျွန်တော်တို့ခေတ်၊ကိုညီထွဋ် တို့ခေတ်တုန်းကလည်း အသံမသွင်းခင်မှာ သီချင်းတွေကို တိပ်ခွေလေးနဲ့အကြမ်းဆိုတာ၊ တီးတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီချင်းကို တကယ့်ပရိသတ် လက်ထဲပို့တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်သီချင်းကို ဘယ်လိုဖန်တီးမယ်၊ ဘယ်လိုတင်ပြမယ်၊ ဘယ်ဟာကို အရင်ပြမယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းကို စနစ်တကျဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ အသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးလုပ် ကြတယ်။ ခုလည်းလုပ်တဲ့ လူတချို့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်မှာ နည်းပညာတွေက အရမ်းတိုးတက်လာပြီး ကွန်ပြူတာရှိရင်ပဲ သီချင်းတီးလို့ ရတယ်။ တချို့ဆိုအသံသွင်းတာ လည်းကိုယ့်အိမ်မှာပဲ သွင်းလိုက်လို့ရတဲ့ အခါမျိုးမှာ အသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို စနစ်တကျ ဖန်တီးလုပ်ကိုင်တာမျိုးတွေ နည်းလာပါတယ်။ လူငယ်တွေမှာ ပါရမီတွေ ရှိကြပါတယ်။ မထင်ထားလောက်အောင် ဖန်တီးနိုင်မှုလည်းရှိတယ်။ အသစ်တွေ ဖော်ထုတ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်သီချင်းတွေကို ပရိသတ် ရှေ့ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ ညက်ညက်ကလေးနဲ့ တင်ပြချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကို ရောက်ဖို့အတွက် ကျွမ်းကျင်တဲ့အသံဖမ်း အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂီတစစ်စစ်တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့အတွက် စနစ်တကျလုပ်ရတာမျိုးပါ။ ဒီလိုမျိုးလုပ်ပါများလာရင် ဂီတလောကမှာ အပေါက်ကလေးတွေ ဖြစ်လာတာပေါ့။ မကြီးသေးခင်မှာ စနစ်တကျလုပ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
မေး- ကိုမျိုးကျော့က စာသားတွေကိုအရမ်း ညက်ညောတာမျိုးတွေ အဓိက သုံးစွဲတာတွေ့ရပါတယ်။ ကိုမျိုးကျော့ရဲ့ သီချင်းရေးသားတဲ့ အခါမှာထားရှိတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိပါရစေ။
ဖြေ- ကျွန်တော်အမြင်က ဂီတဆိုတာက တီးလုံးအနေအထားနဲ့ တင်ပြပုံကကြမ်းချင်ကြမ်းနေမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဂီတကနေ လူတွေရဲ့စိတ်မှာ၊ ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေ၊ ဖွင့်ထုတ်ချင်တဲ့ ခံစားမှုတွေကို တီးလုံးတွေ၊ စာသား တွေပေါ်ကနေ ပြန်ရရှိပြီး ကျေနပ်မှု တစ်ခုပေးရမယ်။ ဒါမှလည်း သူတို့အတွက် ဂီတကဖျော်ဖြေမှု ဖြစ်စေမယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါကြောင့် စကားလုံးတိုင်းမှာ အဓိပ္ပာယ်ထည့်နိုင်ပြီး နူးညံ့တာမျိုးကို ရွေးချယ်သုံးစွဲတာပါ။
မေး- အသက်အရွယ်၊ ကိုယ့်အနေအထားကြောင့် ရှိုးတွေ၊ စီးရီးထွက်ရှိမှုတွေမှာ ပိုမိုရွေးချယ်လာရတယ်လို့ ထင်ပါသလား။
ဖြေ - ကျွန်တော့်ပုံစံအတိုင်း သွားနေတာပဲ။ အဲဒီမှာမှ အသက်အရွယ်၊ ကိုယ့်အရှိန်နဲ့ ကိုယ်လုပ်သင့်တာကို ပြောင်းပြောင်း လုပ်သွားတဲ့သဘောပါ။ ကျွန်တော်က သီချင်းဆိုရမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ စင်မြင့်ထက်မှာ ဆိုနေရတဲ့သူတွေကို ကူညီနေရလည်း ကျေနပ်တဲ့လူပါ။
မေး - ကိုမျိုးကျော့ပြောတဲ့ မျိုးကျော့ရဲ့ ဂီတပုံစံရဲ့ Goal က ဘယ်လိုပုံစံများလဲ။
ဖြေ - အသံနဲ့တင်မဟုတ်ဘဲ အရုပ် နဲ့ တင်ပြတာမျိုးလည်း ပါနိုင်ပါတယ်။
Posted by MgHla at 9:54 AM 24 comments:
Posted by Shinmin at 2:53 PM 10 comments:
Labels: News, photo, Shinmin
MKM @ Thingyan 2009
MKM @ Singapore Thingyan 2009
T home သင်္ကြန်မှ မန်းတောင်ရိပ်ခို သီချင်းပါ။
Thingyan Songs - MyoKyawtMyaing
Photo credit: Soe Thiha, Native Myanmar Forum.
Video credit: myanmarvcd
Posted by Shinmin at 3:14 AM3comments:
Labels: MTV, photo, Song
Posted by Shinmin at 12:16 AM6comments:
မျိုးကျော့မြိုင် ရေးခဲ့တဲ့ ဒီ ချစ်သူ သီချင်းလေးကို ပထမဦးဆုံး ဆိုခဲ့တာ နေမျိုးဆေးပါ။ ဒီနောက်မှာ သူ ကိုယ်တိုင် ဆိုခဲ့ပြီး၊ ဖြူ ၊ အယ်လ်လွန်းဝါတို့က နောက်ပိုင်း ပြန်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
တေးရေး - မျိုးကျော့မြိုင်
ဘယ်ချိန်ခါမဆို ထာဝစဉ် ပြုံးရွှင် နေတတ်တဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူ
တစ်ခါတစ်ခါ သူစိတ်တိုင်းမကျတောင် အစဉ်အားပေးတတ်တဲ့သူ
ကိုယ်ပျော်ရင် သူလည်း ပျော်တယ်
ကိုယ်ငိုရင် သူလည်း ငိုတယ်
တခါတလေများ အပြင်ပြဿနာတွေ ယူလာမိ သူစိတ်မချမ်းသာအောင်
ပြန်လည်တွေးတိုင်း သနားလို့လာတယ် ဘယ်သူနဲ့မှ မတူဘူး
ခွင့်လွှတ်ရင်း အမြဲဂရုစိုက်တတ်တဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူ
ဘယ်ချိန်ခါမဆို ကိုယ့်အနားမှာ အစဉ်ရှိတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူ
ကြာလာလေလေ ပိုချစ်လာလေ တကယ်ပြည့်ဝလွန်းတဲ့သူရယ်
သူပျော်ဖို့ ရှေ့တန်းတင်မယ် ဒီသီချင်းလေးနဲ့ကိုယ်တောင်းပန်မယ်
သူနေချင်တဲ့ ဘ၀မျိုးမှာ အတူနေနိုင်ဖို့ ကိုယ်ကြိုးစားမယ်
ဒီသီချင်းလေး သူ့အတွက်ဆိုမယ် ကြင်နာတတ်တဲ့ သူ့အကြောင်းတွေ
တခါတလေများ အပြင်ပြသနာတွေ ယူလာမိ သူစိတ်မချမ်းသာအောင်
Posted by မေ at 12:28 PM6comments:
Labels: Lyrics, may, Single
မျိုးကျော့မြိုင်နဲ့ ဒိုးလုံးရဲ့ စားသုံးကြည့်ထဲက သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ နှလုံးသားအတွက်သီချင်း စုပေါင်းခွေမှာ ပြန်ဆိုထားပြီ ဖြူ ကလည်း သူ့ရဲ့ ပထမအခွေ ဖြူ မှာ ပြန်ဆိုထားပါတယ်။
အချစ်ကြောင့် - မျိုးကျော့မြိုင်
အချစ်ကြောင့်ရူး အချစ်ကြောင့်မူး ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ
အချစ်နာကျ အချစ်ဒဏ်များ ခံနိုင်ရည်မရှိပါ
ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀ အဆိုးဆုံးက ဒီအချစ်ပါ
အိပ်လို့မရ စားလို့မရ အကြိမ်ကြိမ်သေဆုံးကာ
အချစ်ကြောင့်ပေါ့ နေ့ညတို့ ပျော်ခဲ့ဖူးသလို
အချစ်ကြောင့်ပေါ့ နှစ်လတို့ ငိုခဲ့ဖူးတာ
အသည်းကွဲကြ လွမ်ဆွေးကြ ဒီအချစ်ဟာ
ရှိလည်းကောင်း မရှိလည်းကောင်း ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ
ကြီးပြင်းခဲ့ ဘ၀ရဲ့အစ ရင်ခုန်သံများဟာ
အခုများ ဘယ်အနားမှာ မရှိတော့ဘူး မရတော့ဘူး
ကလေးလေးဘ၀ အချစ်သီချင်းများ ကိုယ်ချရေးကာ
အချစ်ဆိုတဲ့ စာသားတွေနဲ့ ကိုယ်ကြည်နူးလာ
အမည်းစက်များ လောကဓံကြား တရားခံဖြစ်လာ
ချစ်သူအပြုံး အလှဆုံး ကိုယ်ထင်ခဲ့တာ
အဆင်မပြေခဲ့သော အချိန် ဒီအချစ်ဟာ
ချစ်သူ အပြုံး အလှဆုံး ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ
တကယ်ကို အခုများ ဘယ်နားမှာ
Posted by မေ at 12:48 PM No comments:
၁။ ထစ်ချုန်းမိုး - ဇော်ဝင်းထွဋ်-မျိုးကျော့မြိုင်
၂။ အက်ဆစ်လိုအမုန်းများ - ဇော်ဝင်းထွဋ်
၃။ အနားမှာဘယ်သူရှိလဲ - ရင်ဂို
၄။ အစိမ်းရောင်နေ့ရက်များ - ဟယ်ရီလင်း
၅။ ၀ဋ်ကြွေး - ဇော်ဝင်းထွဋ်
၆။ မင်းနဲ့အတူ - မျိုးကျော့မြိုင်
၇။ မေ့ထားလိုက်- ရင်ဂို
၈။ အသွင်ပြောင်းမယ့်နေ့ - ဟယ်ရီလင်း
၉။ ထစ်ချုန်းမိုး - (ဗီဒီယိုအက်ဒစ်ဗာရှင်)
Posted by မေ at 11:39 AM 1 comment:
Labels: album, may
MKM's One Man Show VCD news
Rapper အဆိုတော်ကြီး မျိုးကျော့မြိုင် တစ်ယောက် One Man Show လုပ်ထားတဲ့အပေါ် စီးရီးအခြေအနေ ဘယ်လိုရှိနေပြီလဲ ဆိုတာ သိချင်တာကြောင့် မေးကြည့်ဖြစ်ခဲ့ရာက...
ကျွန်တော့် One Man Show က အဆိုတွေတော့ အကုန် ပြီးနေပြီ။ လုပ်စရာ ကျန်တာလေးတွေ လုပ်နေတာပေါ့။ ပြီးရင်တော့ EZY က ထုတ်မှာပေါ့။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့် အဆိုတွေတော့ ပြီးပြီ၊ အတီးလေး နည်းနည်း ကျန်သေးတာပေါ့။ အဲဒီမှာ SHOW အပြင် ကျွန်တော့်ရဲ့ အပြင်ရိုက်တဲ့ MTV တွေ ထပ်ဖြည့်ထားတာတွေလည်း ရှိသေးတာပေါ့။ သီချင်းက ရွေးထားတာ တော်တော်များတယ်။ (၂၈)ပုဒ်လောက် ရှိမယ်ထင်တယ်။ အဲဒါတွေ အကုန်လုံးက ရွေးထားပြီးသား တွေပါ။ ကျွန်တော့် One Man Show အခွေက ထွက်လာရင် ကျွန်တော့်အတွက် ဘာတွေ ထူးခြားလာနိုင်လည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်တစ်ခါမှ မလုပ်ခဲ့တော့ လုပ်ရမယ့် အချိန်တောင် တော်တော် နောက်ကျနေပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကျတော့ ခပ်အေးအေးပဲ နေတော့တာကိုး။ ဒါကြောင့်လည်း အခုမှ လုပ်ဖြစ်တာကိုး၊ ဘာတွေ ထူးခြားလာလည်း ဆိုရင်တော့ ထူးထူးခြားခြားကြီးတော့ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်အသက် ကြီးလာတဲ့ အပေါ်မှာ One Man Show လုပ်တဲ့ အခါကျတော့ ပြောင်းလဲလာမှု ဘာတွေ့ရလဲ ဆိုရင် အဲဒါကျတော့ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ဘယ်လိုခေါ်မလဲ ဆိုတော့ အနုပညာသမားတိုင်း သိပါတယ်။ ကိုယ်က သီချင်းပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဂီတအနုပညာ လုပ်တဲ့အခါမှာ စိတ်နှစ်နေတဲ့အခါ ကျတော့ ကိုယ်ကသာ အသက်ကြီးလာတာ၊ လူတိုင်းက ကိုယ်နဲ့ သူငယ်တန်းကတည်းက အတူတူကြီးလာတဲ့ သူတွေလိုပဲ စိတ်ထဲမှာ ထားလို့ရတယ်။ အဲဒါက ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်တဲ့ဟာလေ။ တချို့နေရာတွေမှာ လူကြီးလို နေရမယ့် သီချင်းတွေနဲ့ တွေ့ရတဲ့ အခါကျတော့ တကယ့်ကို သူငယ်တန်းကတည်းက ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလို ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒါက အရွယ်နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး။ ဂီတပုံစံ ပြောင်းလဲလာမှုကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံပဲ ကိုယ်ထူထောင် တော့တာပါ။ နိုင်ငံတကာမှာ ရှိနေတဲ့ သီချင်း ပုံစံတွေ ငယ်ငယ်ကဆိုရင် အရမ်း နားထောင်တာပေါ့။ အခုကျတော့ နည်းနည်းလေး ကြားလိုက်ရင်ကို သူတို့ ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲ၊ သူတို့ဘာလဲဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေလို တစ်ခါတစ်လေ ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်သီချင်းကတော့ ဘယ်သူ့ဟာပဲဆိုဆို ကိုယ့်လိုပုံစံပဲ ပေါက်ရမယ် လုပ်ယူတာတော့ မဟုတ်ဘူး ဖြစ်နေတော့တာပေါ့နော်။ Hip Hop ပွဲတော်မှာ Rapper တစ်ယောက်အနေနဲ့ လာဆိုရတာ ဘယ်လိုနေလဲ ဆိုရင်တော့ ဒီဟာက စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ အဲဒီလိုတွေ လာတယ်။ လာပြီးတော့လည်း ပရိသတ်တွေက မသိသေးတဲ့ လူသစ်တွေ ရှိရင်ရှိမယ်။ သိပြီးသားတွေလည်း ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ အဲဒီလိုမျိုး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တွေ့ရတော့ ကျွန်တော် လာရတာကို ပျော်နေပြီလေ။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော် ဆိုရတာကိုကျတော့ အထူးတလည် ဘာမှ မပြင်ဆင်တော့ဘူးလေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီလိုမျိုး ပွဲကြီးမှာ ကြည့်နေရတာကို သဘောတွေ ကျနေပြီ။ Rapper တစ်ယောက် အနေနဲ့လို့ပဲ ပြောပြော၊ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြောပေါ့နော်။ သီချင်းပေါ်မှာတော့ အဲဒီလိုမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ရန်ပုံငွေ ရှိုးတွေမှာ လိုက်ဆို ပေးဖြစ်နေတာက အဲဒီအတွက် စာသားနဲ့လည်း ရေးပြလို့ မရသေးဘူး။ စိတ်ထဲမှာလည်း အဲဒီအတွက် ဆိုဖို့ သီချင်းကို ဆိုပါဆိုလို့ ဆိုဖို့ မရဲသေးဘူး။ အခုဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ ကိစ္စတွေပေါ့နော်။ အဲဒီဟာတွေပေါ်မှာ ကျွန်တော် နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်။ နိုင်သလောက်လေး လုပ်ပေးတဲ့ သဘောပါ။ ကျွန်တော် ဒီလိုမျိုးတွေဆို ပိုလုပ်ပေးချင်ပါတယ်။
Credit: Snap Shot Journal
Posted by Shinmin at 11:09 PM 1 comment:
Labels: interview, News, Shinmin, Show
ထွက်ခဲ့တဲ့ ခုနှစ် အတိအကျ မသိပေမဲ့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကျော်လောက်မှာ ထွက်ခဲ့တယ် ထင်တဲ့ ဒီအခွေလေးကို ရှာတွေ့သလောက် ပြန်ပြီး share လုပ်လိုက်ပါတယ်။
အားလုံး ချစ်ခြင်းနဲ့ သင့်မြတ်နိုင်ကြပါစေ :)
မျိုးကျော့မြိုင် - စိတ်တိုင်းမကျခြင်း
မျိုးကျော့မြိုင် - ချစ်ခြင်းနှင့် မသင့်မြတ်ကြသူများ
သီရိဂျေမောင်မောင် - မင်းနဲ့သာဆို
ထွန်းအိန္ဒြာဗို - အချစ်ရှိသောနေ့စွဲများ
ထွန်းအိန္ဒြာဗို - ငိုနေတဲ့အပြုံးများ
ဇော်ဝင်းထွဋ် - ကိုယ်ဘယ်လိုအရူးမျိုးလဲ
Posted by မေ at 8:27 PM3comments:
Credit to Myanmar People Magazine
Posted by မေ at 8:03 PM6comments:
Labels: life, may, News, photo
မျိုးကျော့မြိုင် ကိုယ်တိုင်ရေးသည့် Blog မဟုတ်သော်လည်း သူ့ပရိသတ်များ၏ ဂီတအားဖြင့် ဝေမျှခံစားရာ Fan Club ပါ။
This is not reallyapersonal blog but it's more likeafan club for Myanmar Rapper; we be bloggin' bits about his songs, his remixes, his albums, his lyrics & his music.
ကျွန်တော့်နာမည် မျိုးကျော့မြိုင်ပါ။ ခုနှစ်မိုင်မှာ နေပါတယ်။
MKM @ www.planet.com.mm
၁၉၉၀ ~၂၀၀၀ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်များမှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ ကက်ဆက်ခွေ၊ စီဒီခွေ ကာဗာများ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်များမှ အင်တာဗျူးများနှင့် အခြား resources များကို ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ကူညီပေးပါရန်။
Let"s talk about MKM!
မျိုးကျော့မြိုင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း 'ကျွန်တော်က သီခ...
Visitors to MyoKyawtMyaing